15 siyaabood oo aad ku ahaato mid waxtar leh marka ay mugdi iyo qabow tahay dibadda
Bogga horeWax soo saarka
Xilliga jiilaalka iyo deyrta, wax soo saarkeena ayaa inta badan hoos u dhacaya: way nagu adagtahay inaan kacno oo aan ururino fikradahayaga. Sidoo kale aad bay u adagtahay in aad si wanaagsan u joogtid oo aad dhiirigeliso. Natiijo ahaan, rabitaanka shaqada ayaa laga yaabaa inuu meesha ka baxo.
Waxaan waydiinay shaqaalaha Kozmik Panda iyo akhristayaasha inay wadaagaan siyaabaha ka caawinaya inay wax soo saar yeeshaan inta lagu jiro xilliga qaboobaha.
Yulia Lokshina 23 sano jir ah. Abuuray. Inta badan waxay ka shaqeysaa guriga.
Naftaada u oggolow inaad nasato
Si aad u ahaato mid wax soo saar leh, waxaad u baahan tahay, sida ay hadda sheegaan, inaad ku jirto kheyraadka. Nasashaduna waa waxa ka dhigaya.
Tusaale ahaan, si aan shaqada uga nasto, waxaan ciyaari karaa muusig qosol leh iyo qoob ka ciyaar. Ama samee yoga, wax akhrinta, iyo mararka qaarkood, kaliya jiifso 15 daqiiqo iyadoo indhahaagu xiran yihiin. Jahwareerkan yar ayaa buuxinaya kharashka oo soo kabsanaya xoog. Waxaan isku dayaa inaan qaato nasasho nasasho saacad kasta.
Xilliga jiilaalka, wax soo saarka si dabiici ah ayaa hoos u dhacaya, tani waa in la tixgeliyaa. Oo halkan waxaa muhiim ah in la fahmo in aadan kasban karin dhammaan lacagta adduunka. Sidaa darteed, waxa fiican inaad marka horeba caafimaadka maskaxdaada iyo jidhkaagaba wax ka qabato, naftaada dhegaysato oo aad samayso waxa aad rabto.
Evgeniya Terekhova 23 jir ah. Madaxa qaybta qaybinta. Waxay ka shaqeysaa guriga iyo xafiiska labadaba.
Isku day inaad ka shaqeyso meel ka baxsan guriga
Wax yar oo la yaab leh, laakiin jabsiga nolosha shaqada, si aan naftayda ugu dhejiyo waxyaabo: si joogto ah u socdaal meel, si aan ula kulmo qof. Haa, jiilaalka ma rabo inaan ka tago aqalka. Laakin aakhirkii, maalmihii aan guriga ka maqnaa aad bay ii fududaayeen ugana faa’iidi badnaayeen.
Waxay u muuqataa in aqalku uu diiran yahay oo raaxo leh, laakiin tani waa dharbaaxo: dhammaadka, waxaad dareemeysaa diidmo buuxda oo ah inaad wax qabato. Si aadan naftaada ugu helin xaalad naxariis darro ah, waxaad u baahan tahay inaad sii socoto oo aad ilaaliso xawaaraha caadiga ah.
Daria Kostyuchkova waa 29 jir. Tafatiraha Podcast Waxay ka shaqeysaa guriga
Si joogto ah hawo u geli qolka
Wax qarsoodi ah maaha in hawada cusubi si fiican u kiciso. Xilliga jiilaalka, marka heerkulka baytariyadu u eg yihiin digsi cadaan ah, tani aad bay faa'iido u leedahay. Dhowr saacadood oo shaqo ah qolka cidhiidhiga ah, maskaxdu dhab ahaantii way karkarisaa, tani maahan ok.
Sidaa darteed, waxaan qolka hawo siiyaa dhowr jeer maalintii. Waxaan ka furay albaabka balakoonka oo ka tagaa 10 daqiiqo. Aniga naftayda ayaa ka cararaya qabyada: Waxaan aadaa inaan shaah kariyo ama sameeyo jimicsi yar. Nasinta noocan oo kale ah ee shaqada, beddelka sawirka indhahaaga hortooda iyo hawo cusub ayaa kaa caawinaysa inaad ku soo noqoto hawlaha oo aad si degdeg ah farahaaga ugu mariso kumbuyuutarka.
Vyacheslav Dryuchin 23 jir ah. horumarinta IOS. Ka shaqeeya xafiis.
Isticmaal nalalka smart
Waxa iigu adag aniga waa in aan raaco hawl maalmeedka, sababtoo ah waa isaga kan si toos ah u saameeya wax soo saarka. Mararka qaarkood ma maqlo alaarmiga mana dareemo in qof i toosinayo. Markaan kacona, waxaan dareemaa culays iyo hurdo. Waxaan ogaaday inay aad iigu adag tahay inaan tooso wakhtiga ku habboon ee jiilaalka. Si ka duwan xilliga xagaaga, marka fallaadhaha qorraxdu ay gudaha u galaan daaqadda oo ay si dabiici ah ii toosiyaan.
Sidaa darteed, waxaan go'aansaday inaan dalbado nalalka iftiinka qolka jiifka ee u ekaysiiya waaberiga. Codsiga, waxaad u baahan tahay inaad dejiso wakhtiga kor u kaca ee la rabo, iyo wakhtigan waxay si tartiib tartiib ah u kicin doonaan sidii qof guriga ku jira oo kaliya u shiday iftiinka ama furay daaha. Kuma filna daryeel la'aan, fuulid u eg xayaysiis, laakiin kacitaanka ayaa yara fudud.
Tanya Zaitseva waa 21 jir. Maareeyaha SMM. Waxay ka shaqeysaa guriga
Ha ku shaqeynin dharka jiifka
Ma jiro dhar aad ku seexato oo sariirta ka shaqeyso! Waxaan la kulmay jabsiga nolosha ilo kala duwan, laakiin waayo-aragnimadayda ayaan ogaaday: markaad ku fadhiisato dharka jiifka, sariirtu waxay soo jiidataa laabteeda diiran.
Samee goob shaqo oo raaxo leh
Waxa aan ogaaday in mar kasta oo ay ii farxad badan tahay in aan miiska la fadhiisto, ay korodho wax-soo-saarkaygu. Sidaa darteed, waxaan u qoondeeyay meel gaar ah shaqada, kursi raaxo leh iyo miis sare. Oo lagu daray kombuyuutar laptop ah. Waxaa jira meelo koronto oo dhow oo aan lahayn wax carqaladeeya.
Waxa kale oo muhiim ii ah inay hareeraha ku qurux badan tahay. Xilliga xagaaga waxaan qolka ku qurxiyaa ubaxyo cusub, ubaxyo qallalan iyo dhir dheri ah, iyo xilliga qaboobaha, shumacyo iyo ubaxyo. Sidoo kale, marka ay madoobaato, waxaan daa laambadda si aan u abuuro iftiin gudaha ah.
Naftaada ku abaal gud hawlaha la qabtay
Had iyo jeer way adag tahay in la kaco oo la shaqeeyo xilliga qaboobaha, sidaas darteed marar badan ayaan naftayda ammaanaa. Waxaan isku dayaa inaan aad u nasto si aysan u dhicin culeys xad dhaaf ah. Mararka qaarkoodna, halkii kafeega guriga lagu sameeyo, waxaan aadaa kafateeri aad u aadka-mega-leh-latte-cream-latte!
Lera Babitskaya 22 jir ah. Wariye. Waxay ka shaqeysaa guriga
Qubayso markaad rabto inaad kacdo
Waxa aan isticmaalaa jabsiga nolosha marka aan dareemo in aan dhab ahaantii ku seexdo safarka. Xitaa haddii aan hore u qubaystay subaxdii, waxaan aadi karaa mar labaad si aan u dhaqo wakhtiga qadada, si biyuhu ay xoogaa ii kiciyaan.
Isla mar ahaantaana, waxaa lagu talinayaa in aan la jilcin, taagan hoos durdurrada diiran, laakiin, liddi ku ah, si heerkulku wax yar ka hooseeyo sida caadiga ah. Hagaag, heerka adag, waa qubeyska ka soo horjeeda.
Caadi ahaan, safarkan musqusha wuxuu qaataa 5-7 daqiiqo, kaas oo si fiican ugu habboon fasax gaaban oo u dhexeeya hawlaha. Tan iyo markii aan ka shaqeeyo guriga, aad ayaan ugu faraxsanahay samaynta khiyaamadan haddii ay noqoto mid aan loo dulqaadan karin. Marka wakhti la waayo, waxaad si fudud wajigaaga ugu dhaqi kartaa biyo qabow.
Ilaa hadda, waxaan ahay kaliya biohacker-ka bilawga ah. Laakiin waxaa ka mid ah caadooyinkayga waxaa jira baaritaan joogto ah oo jirka lagu sameeyo lixdii biloodba mar, taas oo aan sidoo kale fiiriyo fitamiinada.
Waxay dhammaan bilaabeen markii aan u imid dhakhtarka sannad iyo badh ka hor anigoo ka cabanaya daal daran, hurdo iyo naxariis darro. Anigoo ah qof aan waligiis booqan dhakhtarka endocrinologist nolosheyda, waxaan horeyba u alifay nafteyda tiro badan oo baaritaanno xun leh. Laakiin wax walba waxay noqdeen kuwo prosaic ah: Waxaan lahaa yaraanta daran ee fitamiin D. Qiyaasta 30-100 ng / ml, qaddarkeedu wuxuu ahaa 4 ng / ml oo keliya. Adiga, guud ahaan, sidee igu soo gaadhay?, waxaan xasuustaa, in aan waydiiyay dhakhtarka.
Tan iyo markaas, waxaan isku dayay inaan la socdo dheellitirka fiitamiinada iyo macdanta iyo laga bilaabo Sebtembar ilaa Abriil waxaan cabbaa fitamiin D-ga oo aan ku guuldareysan. Oo ay la socdaan, iyo fiitamiinada kale, oo aan ka maqan yahay waqti gaar ah.
Natalya Kopylova 33 sano jir ah. Wariye. Waxay ka shaqeysaa guriga
Fasax qaado November
Qeybta labaad ee sanadka guud ahaan waa mid aad u adag oo caajis ah. Saacadaha iftiinka maalintii ayaa hoos u dhacaya, cimiladu way sii xumaanaysaa. waxba ma rabo Xataa naso. Laakiin waxaan naftayda ka tagaa usbuuc fasax ah bilowga Noofembar, kaliya si aan u neefsado oo aan u dhammeeyo sanadka oo dhan firfircoon.
Dheeraad ah, way fududahay: waxaa jira fasaxyo Janaayo, fasaxyada jinsiga ee Febraayo iyo Maarso, ka dibna gu'ga! Markaa arrimuhu uma eka culays aan loo adkaysan karin.
La imow caadooyinka jiilaalka
Dhibka ugu weyn ee in aan wax soo saar lahayn xilligan oo kale waa in aan waqti badan ku bixinno rafaad iyo hilow. Haddii aad isku daydo inaad dib u qorto waayo-aragnimada jiilaalka, noloshu way fududaan doontaa.
Tusaale ahaan, saaxiibkay ayaa fuulaya barafka, marka marka uu baraf da'o, aad ayay ugu faraxsan tahay. Ma aqaano ciyaaraha jiilaalka, laakiin waxaan isticmaalaa hack noloshayda. Waxaan la imid madadaalo aan sameeyo kaliya Noofambar-February: Waxaan kariyaa suxuunta qaarkood, daawashada filimada qaarkood.
Aynu nidhaahno Diisambar waxaan siidaeynayaa inaan dib u akhriyo buugag taxane ah oo qabow. Oo hadda, jiilaalka mar dambe ma aha mid cabsi leh, sababtoo ah waxay ballanqaadaysaa wax wanaagsan!
Si raaxo leh u labbiso
Waxay dhacdaa in jiilaalka aad rabto inaad guurto buuro. Laakiin sidee ayaad u malayn kartaa in tan aad u baahan tahay inaad gashato dhejisyada, surwaalka, daboolka ku garaaca korantada ... Markaa dhammaan rabitaanku wuu baaba'aa!
Si nolosha loo fududeeyo, waxaad ku wareeri kartaa dhar aad u raaxo leh. Soo hel jaakad aan miisaan lahayn oo aan qabow ahayn oo aan kululayn gudaha, koofiyadaha aanad u muuqan sida Alyoshenka bini'aadamka, kabo aan simbiriirixan. Haddii waxyaallaha jiilaalka ay farageliyaan nolosha, waxay u baahan yihiin in lagu beddelo kuwa kale. Ma jabna, laakiin waa u qalantaa.
Olga Polkovnikova 32 jir ah. Fasaxa umusha.
Nadiifi gurigaaga marar badan
Tani maaha dariiqa ugu muhiimsan ee aad naftaada ku kicin karto oo aad tamartaada dib ugu soo celin karto, laakiin waa mid ka mid ah, laakiin aad ayay ii caawisaa. Iyadoo aan loo eegin xilliga, waxaan nadiifiyaa laba ama saddex jeer toddobaadkii. Sida caadiga ah, tani waa abaabulka booska. Waxaa muhiim ii ah in shay kasta uu leeyahay meesheeda, amarkaasna la ixtiraamo.
Nadiifintu waxay caawisaa xaaladda maskaxdayda. Waa sida fekerka: wax walba waan ka gooyaa, ku milmaa habka. Natiijaduna waxay abuurtaa dareen raaxo leh. Ma lihi wax daal ah, kaliya qanacsanaanta. Waxaan dareemayaa in layga buuxiyey xoog cusub iyo xamaasad shaqo.
Firaya Nigomatullina 54 jir ah. Milkiilaha kafeega. Waxay ka shaqeysaa guriga iyo xafiiska labadaba.
Orod ama socod maalin kasta
Waxaan ordaa ugu yaraan 30 daqiiqo subax kasta. Haddii aysan jirin xoog iyo rabitaan tan, waxaan kaliya ku socdaa xawaare raaxo leh. Mar uun, waxaan gartay inaan u baahanahay uun, la'aanteed ma bilaabi karo maalintayda.
Oo halkan waa su'aal joogta ah, sida loo ordo xilliga qaboobaha? Si arrintan loo sameeyo, waxaan ku labistaan ​​saddex lakab: nigisyada kulaylka, jaakada gudaha iyo dabaysha, surwaalka dhididka.
Waxaan haystaa kabo orod gaar ah oo leh difaac iyo xuubka (uma ogola in qoyaanku dhex galo, laakiin isla markaa waxay u ogolaataa cagahayga inay neefsadaan). Si aanan u bukoon, waxa aan sanka saaray buff, tuubo unug ah.
Andrey Golub waa 45 jir. Madaxa Waxay ka shaqeysaa guriga iyo xafiiska labadaba.
Dhageyso muusig wanaagsan
Muusigu wuxuu si weyn u saameeyaa wax soo saarkayga. Xaaladdan oo kale, caado gaar ah oo lagu shido muusikada saxda ah ee nooc ka mid ah waxqabadyada qaarkood waa muhiim. Haddii ay garaacday u dhigma niyadeed, waa bingo! Haddii kale, waa uun mashquul.
Intaa waxaa dheer, maadaama aan haysto shaqo aad u kala duwan iyo inta lagu jiro maalinta waxaan beddelaa nooca dhaqdhaqaaqayga marar badan, muusiggu wuxuu caawiyaa inuu si dhakhso ah u hagaajiyo mawjada la rabo.
Sidaa darteed, liiskayga muusiga waxaa ku jira Budha Bar, iyo muusiga qalabka ah ee dhadhankayga (waxaan waydiisanayaa Alice inay wax ku dhejiso profile-kayga), iyo AC / DC, markaan u baahdo inaan ku farxo, iyo muusikada dhalinyaranimadayda, markaan ahay waxay u baahan yihiin in la farxo wakhtiyada adag ama luminta xoogga.
Xuquuqda daabacaada © 2021 - so.kozmikpanda.com, 15 siyaabood oo aad ku ahaato mid waxtar leh marka ay mugdi iyo qabow tahay dibadda!